RollerCoaster Tycoon Classic namely ny App Store | Vaovao IPhone
Ireo zokiolona ao amin'ilay toerana dia azo antoka fa hahatadidy ny lalao Atari tamin'ny taona 90, izay tsy maintsy nataontsika mitantana zaridaina fialamboly. Io lalao antsoina hoe RollerCoaster Tycoon io dia fahombiazana ary vao niantsona tao amin'ny App Store ny kinova voalohany. Ity lalao ity dia misy vidiny ao amin'ny App Store 5,99 euro, izay ahafahantsika manampy extensions samihafa amin'ny vidiny 1,99 euro tsirairay avy ary ao no ahitantsika ny Crazy Worlds, Time Travel ary Toolbox. Ao amin'ny RollerCoaster Tycoon mpilalao dia hankafy ny famolavolana sy ny fananganana roller coaster sy ny manintona, ny fanaingoana ireo valan-javaboary, ary ny fitantanana ireo mpiasa sy ny vola hampidi-bola ilay voly fialamboly.
RollerCoaster Tycoon Classic dia manasongadina
Ilay simulator RollerCoaster tany am-boalohanyAnkafizo ny fahafinaretana rehetra amin'ny lalao RollerCoaster Tycoon® sy RollerCoaster Tycoon® 2 tany am-boalohany, miaraka amin'ny fampiharana vaovao izay manambatra ireo singa tsara indrindra amin'ireo lohateny roa mahazatra.
Fananganana roller coaster: Mamorona morontsiraka mahavariana! Manaova coaster efa voaomana haingana, na ampiasao ny fitaovana fanamboaran-tsakafo tsy manam-paharoa handrafetana sy hanamboarana ny dianao manokana.
Mpamorona zaridaina: Ataovy izay hahasambatra ireo mpitsidika anao amin'ny alàlan'ny fanaovana dia an-tsoavaly na mangatsiaka, fivarotana sakafo sy zava-pisotro, mitaingina rano ary koa fitaterana azy ireo hitety ny valan-javaboary Azonao atao koa ny manamboatra ny valan-javaboary amin'ny alàlan'ny fampidirana ny toerana manodidina, ny fanatsarana ny toerana ary ny fametrahana ny làlana.
Fitantanana park: Tantano ny varotra sy ny ara-bolan'ny zaridainanao hahazoana tombony nefa mahasarika mpitsidika bebe kokoa; alamino ny mpiasanao mba hizotra tsara ny valan-javaboary ary toa tsara indrindra.
Tontolo iainana mahaliana: Amboary ny valan-javaboary lehibe indrindra amina tontolo iainana sarotra, manomboka amin'ny fiadananan'ny Forest Frontiers ka hatrany amin'ny varotra Megamundial Park.
Seho amin'ny zaridaina: Mandrosoa amin'ny alàlan'ny sehatry ny zaridaina 95 mahazatra avy amin'ny RollerCoaster Tycoon® sy RollerCoaster Tycoon® 2.
RollerCoaster Tycoon® Classic€ 6,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » RollerCoaster Tycoon Classic namely ny App Store
Manomboka manolo ny iPhone 7 Plus amin'ny olan'ny fakantsary i Apple
Voamarina fa handefa smartwatches 2 miaraka amin'ny Android Wear 2.0 i Google